အခုလို အခြေအနေတွေ ကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့အခါမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင်ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ရရှိလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ အလှူအတန်းတွေလည်း အမြဲလိုလို လှူဒါန်းသူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းက အားကျ အတုယူနေကြတာပါ။ သူမကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။.
ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းကနေ ယနေ့ချိန် အထိ ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြိုးစားပမ်းစား Speak Out လုပ်ပေးနေတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးခြင်းတွေကို ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများလည်း လှူဒါန်းပေးနေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ခေးဆက်သွင်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့အခါ စိတ်ချယုံကြည်တဲ့ သူထံတွင်သာ လှူဒါန်းသင့်ကြောင့် ရေးသား ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း “အလှူတွေလှူတဲ့အခါ အလှူခံပြီး တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူတွေက လုံခြုံရေးအရရော အသက်အန္တရာယ်အတွက်ရော တချို့မှတ်တမ်းတင်မပေးတာ အသေးစိတ်မဖော်ပြပေးနိုင်တာရှိပါလိမ့်မယ် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမျိုး လိုအပ်နေတဲ့သူတွေလက်ထဲအရောက် ထည့်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးဆီမှာ စိတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့လှူတာကောင်းပါတယ်… အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လက်ကလှူတာ ညာလက်မသိကြပါစို့ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်တော့မှ ဒို့ကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘယ်လောက်လှူခဲ့လဲဆိုတာ ကြွားတော့မယ်ကွာ ” ဆိုပြီး လက်ရှိမှာ လုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြောပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိရအောင် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ…..သရုပျဆောငျ ခေးဆကျသှငျကတော့ ရုပျသံ ဇာတျလမျးတှဲမြားတှငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးဝနျးရံခွငျးကို ရရှိလာတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ စုဆောငျးထားတဲ့ အနုပညာကွေးတှနေဲ့ အလှူအတနျးတှလေညျး အမွဲလိုလို လှူဒါနျးသူတဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ လူတိုငျးက အားကြ အတုယူနကွေတာပါ။ သူမကတော့ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံက လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောလညျး ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျနတောကိုလညျး မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။.
ဖဖေျောဝါရီလအစပိုငျးကတညျးကနေ ယနခြေိ့နျ အထိ ဒီလှုပျရှားမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ကွိုးစားပမျးစား Speak Out လုပျပေးနတောကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးကြူးခွငျးတှကေို ရရှိထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနကွေတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျ စားနပျရိက်ခာမြားလညျး လှူဒါနျးပေးနတောပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး ခေးဆကျသှငျရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ လကျရှိအခွအေနတှေကွေောငျ့ အလှူတှေ လှူတဲ့အခါ စိတျခယြုံကွညျတဲ့ သူထံတှငျသာ လှူဒါနျးသငျ့ကွောငျ့ ရေးသား ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး “အလှူတှလှေူတဲ့အခါ အလှူခံပွီး တဈဆငျ့ဆောငျရှကျပေးကွတဲ့သူတှကေ လုံခွုံရေးအရရော အသကျအန်တရာယျအတှကျရော တခြို့မှတျတမျးတငျမပေးတာ အသေးစိတျမဖျောပွပေးနိုငျတာရှိပါလိမျ့မယျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့သူမြိုး လိုအပျနတေဲ့သူတှလေကျထဲအရောကျ ထညျ့ပေးနိုငျတဲ့သူမြိုးဆီမှာ စိတျပွတျပွတျနဲ့လှူတာကောငျးပါတယျ… အရေးတျောပုံ အောငျမွငျဖို့ ဘယျလကျကလှူတာ ညာလကျမသိကွပါစို့ အရေးတျောပုံကွီး အောငျတော့မှ ဒို့ကတော့ ဘာတှလေုပျခဲ့လဲ ဘယျလောကျလှူခဲ့လဲဆိုတာ ကွှားတော့မယျကှာ ” ဆိုပွီး လကျရှိမှာ လုပျသငျ့တဲ့ အရာလေးတှကေို ပွောပွလာတာဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိရအောငျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။